ठूला दलहरूसँग सहमति गरेर एमसीसी पास गर्दा हुन्छ: पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई| Janachaso Khabar
ठूला दलहरूसँग सहमति गरेर एमसीसी पास गर्दा हुन्छ: पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
संसद चलाउनु पर्छः पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादव
सिन्धुलीमाढी। एमसीसी नेपाललाई दिइएको अहिले सम्मकै ठूलो विदेशी अनुदान भएकाले चर्चाको विषय बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले बताउनु भयो। तर यसलाई धेरै बहसको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो।
जसपाको सँगठन सुदृढिकरण तथा जनजागरण अभियानको उद्घाटन गर्न सिन्धुली आउनु भएका जसपाका केन्द्रीय समितीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले पत्रकारसंँग बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “नेपालमा यस्ता विदेशी सहयोग आउँदा विवाद हुने गर्दछ । विदेशी सहयोग सम्बन्धी व्यक्ति र दलको नीति अनुरुप नभई राज्यले नीति बनाउनु पर्छ। सँधै हैेन केही समय सम्मका लागि देशी, विदेशी संस्थाको सहयोग लिएर देशको विकास गर्ने हामिले नीति लिएका छौँ । ” विदेशी सहयोग पुरै बन्द गर्ने राज्य र संविधानको नीति छैन । एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट प्रमुख दलहरुकाबीचमा सहमति गरेर अनुमोदन गर्दा नै नेपालललाई राम्रो हुने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराले बताउनु भयो। उहाँले व्यक्ति र पार्टिबीच मिल्ने र नमिल्ने भन्ने होइन एजेण्डामा सहमति भयो भने सहमति हुने अन्यथा व्यक्ति र पार्टिसँग मिल्नुको औचित्य नभएको बताउनु भयो।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टिका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादबले पार्टिहरुमा अस्थिरता भएको र लोकतन्त्रमा पनि अस्थिरता भएकाले तत्काल अध्यादेशलाई खारेज गरेर मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नुपर्न बताउनु भयो। चाँडैनै अध्यादेशलाई खारेज गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तर्फ लागेको पनि बताउनु भयो। अध्यादेशले दलहरुलाई अस्थिर बनाउने भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार भन्दा पनि अध्यादेश खारेज महत्वपूर्ण रहेको पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादबले बताउनु भयो ।
जसपाको सँगठन सुदृढिकरण तथा जनजागरण अभियानको उद्घाटन गर्न सिन्धुली आउनु भएका केन्द्रीय समितीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले पत्रकारसँग बताउनु भएको हो । संसद किन अवरुद्ध गरिएको हो ? संसद अवरुद्ध गर्दा के प्राप्त हुन्छ ? के का लागि गरिएको हो ? भन्ने कुरा संसद अवरुद्ध गर्नेहरुनै स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनु भयो । संसद अवरुद्धको कुनै अर्थ छैन त्यसैले संसद अवरोध हटाइदिए संसदले निकास पाउने पनि उहाँले बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदको काम छैन अब भंग गरिदिँदा हुन्छ भनेर पटक पटक भनेकाले संसदलाई अवरुद्ध गरेर फेरि मुलुकलाई अस्थिरता र प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने होकि भन्ने संका पैदा हुने उहाँले बताउनु भयो । त्यसैले संसद भंग गर्ने चाहानाहरुले संसद किन भंग गरिएको भन्ने कुरा जनता सामु स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्षकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा जाने भन्ने कुरा हल्लामात्रै रहेको पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादवले बताउनु भयो। कुनै हालतमा संसद चलाउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।